“Fepa 2020”: andrasana ny mpitsidika miisa 30 000 | NewsMada
“Fepa 2020”: andrasana ny mpitsidika miisa 30 000
Hatao ny 21 hatramin’ny 24 febroary 2020 ho avy izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny “Tsenaben’ny fiompiana, ny jono ary ny fambolena” (Fepa) andiany faha-12. Ho hita mandritra ity hetsika ity ny vokatra, ny kojakoja sy ny fitaovam-pamokarana amin’ireo sehatra ireo, miampy ny mifandraika aminy, toy ny asa tanana, ny fanodinam-bokatra, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tontolo momba ny vola, sns.
Miisa 300 ny mpandray anjara, ary 30 000 ny mpitsidika andrasana. Nambaran-dRabearivelo Andriamananarivo, filohan’ny filakevi-pitantanana (PCA)-n’ny Malagasy matihanina amin’ny fiompiana (MPE), mpikarakara ny hetsika, fa anisan’ny antony nanaovana azy ao amin’ity toerana ity ny maha afovoan-tanàna azy eto an-dRenivohitra ka akaiky ny mpitsidika. Miavaka koa ity andiany faha-12 ity satria mifanandrify amin’ny faha-25 taon’ny MPE. Ankoatra ny fampirantiana sy ny varotra, misy koa ny fanofanana maimaimpoana amin’ireo sehatra ireo.
Nanamarika ny PCA-n’ny MPE fa anisan’ny sehatra miroborobo ny fiompiana trondro sy ny famokarana atody amin’izao fotoana izao. Somary mihisatra kosa ny famokarana atim-borona matavy satria tsy afaka manondrana any ivelany i Madagasikara. Mila ampirisihina koa ny famokarana akoho fakana nofo satria tsy mbola ampy (6 hetsy/isan-kerinandro) raha oharina ny atsy Afrika (7 tapitrisa/isan-kerinandro).